Godkuu Cabdi Daggey, Garanwaa Coomay: – somalilandtoday.com
Godkuu Cabdi Daggey, Garanwaa Coomay:
Tusaale ahaan haddii hammiga ugu sareeya ee Cabdi iyo Coomay uu yahay; in maamule looga dhigo goob lagu cibaadaysto, Coomay ma kala jecel in goobtaasi tahay tu ay ku cibaadaystaan dad islaami ah, Hindus ah, Christian ah ama Buudis ah. Isagu kaliya wuxuu rabaa in maamule uun looga dhigo goob lagu cibaadaysto laakiin Cabdi wuxuu rabaa in kaliya maamule looga dhigo goob ay ku cibaadaystaan dad ay isku diin yahiin. Kuwaa ay isku Diinta yahiin dhibaato walba oo ka timaada wuu u samrayaa una dul-qaadanayaa laakiin haddii ay kala Diin yahiin farahuu ka qaadayaa, waayo profka caashaqiisa maamule jacaylka ah, shuruud baa ku xidhnayd.
W/Q Xasan Cabdi Qaadir Yuusuf ( Hassan Garnayl )